शेर भण्डारी डडेल्धुरा, १२ माघ
अमरगढी नगरपालिका–५, विद्युत रोडमा एउटा पसल छ, सिलाइ कटाइ गर्ने ।
पसल सञ्चालकको नाम शोभा नगरकोटी ।
सबैसँग मीठो बोल्ने चम्किलो अनुहारकी शोभालाई देख्नेलाई लाग्न सक्छ– उनको जिन्दगी सुखमय छ । मनग्य आम्दानी पनि छ व्यवसायबाट ।
तर विगत ?
‘भो कुरा नगर्नु त्यो कालो विगत ।’
किन यसो भन्छिन् शोभा ? कथा दर्दनाक छ ।
...शोभाको विवाह भयो वीरगञ्जका एक केटासँग । विवाह भएपछि तराईमा हाँसीखुसी जीवन बिताउने सपना थियो शोभाको । तर, जीवन उनले सोचेजस्तो भएन ।
सुरूका दिन रमाइला थिए उनका । शिक्षित थिइन् शोभा । विवाहपछि वीरगञ्जमा एउटा स्कुलमा पढाउँथिन् उनी । विद्यार्थीले रूचाएकी शोभाको सबैसँग हाँसेर बाेल्ने बानी थियो ।
‘आखिर त्यै बानी मेरा लागि अभिशाप बनेर आयो,’ शोभा विगततिर फर्किइन् ।
सहकर्मी सरहरूसँग हाँस्दा बोल्दा पनि श्रीमानले शंका गर्न थाले । ‘उसलाई म अरूसँग बोल्दा पनि जलन हुने रहेछ,’ शोभा भन्छिन्, ‘र नराम्रो दृष्टिले हेर्ने क्रम सुरू भयो ।’
श्रीमान् मात्र होइन, परिवारका सदस्य पनि शोभाका पक्षमा भएनन् । दैनिक श्रीमानको कुटाइबीच वीरगञ्जमा पीडा सुनाउने आफन्त र मनले खाएका मान्छे पनि थिएनन् शोभासँग ती दिनमा ।
हत्या गर्ने योजनासहित भारत पुर्‍याइयो
एउटा छोरा थियो शोभाको । श्रीमानले निरन्तर शारीरिक र मानसिक यातना दिँदा पनि भाग्य सम्झेर सहेर बसिन् शोभा ।
‘यतिसम्म भयो,’ शोभा विगत सम्झँदै भन्छिन्, ‘मेरो छोरा दे, तँ जता जान्छेस् जा मलाई मतलब छैन, बरू तँलाई पैसा दिन्छु भनेर पटक–पटक सताइयो मलाई ।’
घरायसी पीडा सहेर बसेकी शोभाको जीवनमा अर्को कालो दिन आयो । श्रीमानले नै उनको हत्या गर्ने योजना बनाए । श्रीमानले हत्या गर्ने उद्देश्यसहित भारत पुर्‍याए शोभालाई ।
‘मलाई मार्न भन्दै रक्सौलमा लगेर एक्लै राखियो, जुनबेला मैले पटकपटक आत्महत्या गर्ने सोच पनि बनाएँ,’ विगत सम्झँदै शोभा भन्छिन्, ‘मर्नुअघि आमाको सम्झनाले आज मलाई सफल उद्यमी बनाउन सहयोग गरेको छ ।’
यति भनेर उनले सिलाइ मेसिनबाट हात झिकिन् । अर्को कुर्सीमा गएर बसिन् र भनिन् ‘थ्याङ्क्स आमा !’
आमालाई किन धन्यवाद ? प्रश्न सुन्नेबित्तकै उनी भन्न थालिन्– मर्नुभन्दा पहिले आमाको मायाले एकचोटि आमालाई फोन गरौं न भन्ने लाग्यो । आमालाई सबै कुरा सुनाएँ ।
दिदीको घर सुनसरी । आमाले बहिनीको उद्धार गर्न भनेपछि दिदी पुग्छिन् वीरगञ्ज । आमाले दिदीलाई भन्नुभएछ, लगत्तै दिदीले फोन गरिन् । दिदीले घरमा बहिनीलाई भेटिनन् । भेटून् पनि कसरी ? श्रीमानले मार्ने योजनासहित शोभालाई रक्सौलमा लगेर राखेका थिए ।
दिदीले मेरो बहिनी खोजिपाऊँ भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि बल्ल उनी घर फर्कन पाइन् ।
शोभा भन्छिन्, ‘प्रहरीमा उजुरी गरेपछि मलाई श्रीमानले घरमा ल्याए । प्रहरी चौकीमा सबै घटना बताए । त्यसपछि श्रीमान् छोड्ने योजना बन्यो छोरालाई लिएर डडेल्धुरा नै फर्किएँ ।’
त्यसपछि शुरू भो सिलाइ कटाइ
अहिले शोभा सिलाइ कटाइबाट मनग्य आम्दानी गर्दै छिन् । सन्तुष्ट पनि छिन् ।
मासिक २०/२५ हजारभन्दा माथि आम्दानी भइरहेको छ उनको । भन्छिन्, ‘घर खर्च गरेर धानेर मासिक १५ हजार बचत गर्छु ।’
म्यादी प्रहरीसम्मको यात्रा
सिलाइ कटाइ सीप सिके पनि उनीसँग मेसिन थिएन । रकम अभावमा सीप भएर पनि उनले काम गर्न पाइनन् । यो घटना हो स्थानीय तह निर्वाचनताका । त्यही बेला गाँउमा म्यादी प्रहरीको तालिम खुल्यो । भर्ना भइन् उनी म्यादी प्रहरीमा ।
‘माइती घरको पनि आर्थिक अवस्था मलाइ मेसिन किनिदिन सक्ने थिएन,’ शोभा भन्छिन्, ‘स्थानीय चुनावका बेला म्यादी प्रहरी बनें ।’
२ महिना म्यादीमा काम गर्दा उनले ४८ हजार रूपैयाँ बचत गरिन् र त्यही रकमले सिलाइ मेसिन किनेपछि सुरू भएको उनको व्यवसाय आज चम्किँदै छ ।
क्याम्पस पढ्ने महिला विद्यार्थी उनको चेला हुन् अहिले । जो दिनभर शोभको पसलमा आएर सिलाइ कटाइ सिक्छन् । यसबापत पनि केही आम्दानी छ शोभाको ।
व्यवसाय गर्ने महिलामाथि धेरै चुनौती रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘महिलाहरूलाई बाहिर हिँड्न पनि समस्या हुन्छ । पुरूषले त्यसै पनि हेप्न खोजिरहेका हुन्छन्।’ उनी अनुभव सुनाउँछिन्, ‘आफू सक्षम र बाठो भए कसैले हेप्दैनन् ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, १२ माघ २०७६, ०९:५०:००